Puntland oo beenteeda laga daba tagay +Cadayn | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Puntland oo beenteeda laga daba tagay +Cadayn
Waxaa maalintii shalay saxaafada lahadlay Wasiirka Deegaanka Maamulka Puntland Mudane Cali Cabdulaahi Warsame ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in wada-hadal ay kula jiraan dowlad Goboleedka Galmudug si loo xaliyo dagaalada maalmihii dambe ka dhacayay Magaaladaas.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Mudane C/kariin Xuseen Guulleed ayaa horay u sheegay in Wasiiro ka kala Tirsan Maamulada Puntland iyo Galmudug in wada hadal ay ku yeelan doonaan magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Heshiiska ayaa qoraya sidan
2- In la joojiyo dhismaha suuqa xoolaha lagu iibsho
3- In guddi ka kooban labada dhinac oo heer wasiir ah kulmaan maalmaha soo socda
4- In la furo garoonka diyaardaha ee ku yaal dhinaca Galmudug
5- In kulanka ugu dambeeya dowlada Puntland iyo Galmudug ku yeeshaan magalada Muqdishu Iyadoo goob joog yihiin madaxdii hore ee Madasha.
Hadaba Websitka Wasaarada Arimaha Dibada Ee Ethiopia ayaa daabacay in heshiis wada gaareen Maamulada Galmudug iyo Puntland kasoo lagu soo afjarayo Dagaaladii maalmahaanba kataagnaa Magaalada Galkacyo.
Hadaba su aasha ayaa ah ma wasaarada arimaha dibada Ethiopia ayaa been sheegaysa mise Puntland ?.
HALKAN KA ARAG HADALKA WASIIRKA UU KUBENIYAY HESHIISKA
HALKAN KA AQRI QORALKA WASARADA ARIMAHA DIBADA EE ITOBIYA
One thought on “Puntland oo beenteeda laga daba tagay +Cadayn”
putlaan ayaa been hegaysa oo galadas cadawgaa ayaa karun badan putlaan maafiyo organisayshon